Heat Pumps ရေအပူပေးစက် - BaganMart
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 364 view counts
Heat Pumps ရေအပူပေးစက်
Brand : Rheem
Model : DE-27W/D
လုပျငနျးအမညျ : Full Bright Myanmar Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 09-261325077,09-261325066,01-663326
Use : Bathroom
Brand Name : Rheem
Power supply : 380V/3PH/50HZ
Heating capacity : 10.8kw
Rated power input : 2.7kw
COP : 4.0
Heat exchanger : Tube Heat Exchanger
Expansion Valve : Emerson Thermal Expansion Valve
Products type : Air Source Heat Pump Systems
Function : House Heating Cooling Hot Water
Housing Material : Powder coated case
Heat pump is not heating the water with direct electricity, but using the electricity under more efficiency way.Heat pump’s efficiency is evaluated by COP value, it is the ratio of heating power output and heating power input, the COP value is changing and depended on the heat pump type, operating condition and etc. i.e. COP=3, it indicate 1kwh power can generate 3kwh power to heat the water. And the extra 2kwh is for free.
စားဝတ်နေရေး Living Life တစ်ခုလုံးအတွက် Customer များစိတ်ကျေနပ်မူ အပြည့်အ၀ရရှိစေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။ Customer များကျေနပ်နှစ်သက်မူ ရရှိအောင်အစွမ်းကုန် ဖန်တီးတည်ဆောက်ရန်၊ ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်နေသူ (Stakeholder) များ၏လိုအပ်ချက်များကို တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအားလုံးကို တရားမျှတစွာ ဆက်ဆံပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်မူမြင့်မားစေရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပေးရန်၊ TQM ( Total Quality Management) စနစ်ကိုကျင့်သုံးရန်၊နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာမူ၊ Customer များကို လေးစားမူ၊ Stakeholder များအားလုံး၏ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မူ (Honesty) ၊ မှန်ကန်မူ (Truthfulness) နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိမူ (Intergrity) ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများကို ယုံကြည်အားကိုးမူ နှင့် အစုအဖွဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိမူ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်သိက္ခာရှိမူ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအဆင့်ဆင့်တာဝန်ခံခြင်းရှိမူ ဖြစ်ပါသည်။
Rheem Commercial Storage Tanks
For Heat Pumps ရေအပူပေးစက်
May I get the quotation for "Heat Pumps ရေအပူပေးစက်" ?